Umvelisi oPhambili wonyaka ka-2021 we-NYC White Label Expo wanikwa iGVB Biopharma
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Umvelisi oPhambili wonyaka ka-2021 we-NYC White Label Expo wanikwa iGVB Biopharma
I-GVB Biopharma, inkokeli kwimveliso ye-hemp-derived cannabinoid ingredient production and white product formulation, ibhengeze namhlanje ukuba ibizwa ngokuba nguMenzi oPhambili woNyaka kwi-2021 New York City White Label Expo. Umsitho, obanjwa minyaka le ekwindla, usebenza njengomboniso wenkulumbuso kunye nomdlalo wokukhangela abathengisi abaphambili kwi-Intanethi.
Eli bhaso lithathela ingqalelo umenzi obalaseleyo weemveliso zeelebheli ezimhlophe, ezivumela ukuphinda zitshintshwe ngabantu besithathu. I-White Label Expo ichaza iikhrayitheriya zokukhetha ezintathu zoMamkeli oPhambili woMamkeli woNyaka woNyaka: ubudlelwane bokuthembela kunye nabaxumi babo, inkqubo ehamba phambili yolawulo lomgangatho kunye namava omthengi ongenamthungo. Abathathu bokugqibela bakhethwa, kwaye i-GVB Biopharma yonyulwa njengophumeleleyo phakathi kweenkampani ezifanelekileyo ezingama-400. Eli bhaso lelinye lamashishini anconyelwa ngokusebenza ngokugqwesileyo kwimimandla yezemveliso, imveliso entsha, inkonzo kunye neelebheli zabucala.
"Sisebenza nzima ukuqhubela phambili ishishini kunye neemveliso ezintsha kunye nemilinganiselo yokuthotyelwa okuphezulu," utshilo uPhillip Swindells, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba se-GVB Biopharma. Inkampani yamkelwe kwi-White Label Expo ngemodeli yayo yokwenziwa komhlaba kunye nemodeli yokulungisa, eyenze umgangatho osemgangathweni weshishini kulawulo lomgangatho kunye nokusebenza okuthembekileyo.
Ubungqongqo bemilinganiselo yokuthobela ye-GVB Biopharma kunye nemigangatho yemigangatho yemveliso yenze ukuba ibe lelinye lawona magama ahloniphekileyo kushishino lwe-hemp cannabinoid. Kunye nezixhobo zikarhulumente zokulungiswa kwe-hemp e-Oregon, imisebenzi emhlophe yeleyibheli yokuvelisa imveliso eLas Vegas, kunye neeofisi zokuthengisa zikazwelonke eLos Angeles, eChicago, eDenver naseMazantsi eFlorida, i-GVB ibonakalise amandla okukhula okukhulu . Ukufikelela kwayo kububanzi belizwe kunye nehlabathi kuyivumela ukuba ihlangabezane nemfuno eqhumayo ye-hemp cannabinoids kwaye ibe liqabane elibalulekileyo kwishishini loosomashishini kunye neempawu ezisebenza kwiimfuno zentengiso.